iZotope mankalaza ny Academy of Motion Picture Arts sy ny siansa 'Award ara-tsiansa sy injeniera ho an'ny fampiasana machine machine + AI amin'ny sarimihetsika / studio fandraisam-peo | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Featured » iZotope mankalaza ny Academy of Motion Picture Arts sy ny siansa 'Award ara-tsiansa sy injeniera ho an'ny fampiasana machine machine + AI amin'ny sarimihetsika / studio fandraisam-peo
iZotope, ilay mpitarika indostria amin'ny haitao haino aman-jery marani-tsaina, dia eken'ny Akademia momba ny sarimiaina sy ny siansa amin'ny Loka siantifika sy injeniera. Mpikaroka mpikaroka ny mari-pankasitrahana Alexey Lukinasan'i iZotope's Rafitra fanodinana feo RX miaraka amin'ny ekipan'ny matematika mihoatra ny 70, injenieran'ny rindrambaiko, mpamorona feo, manam-pahaizana momba ny vokatra ary ny hafa.
Nomena noho ny zava-bita izay miteraka fitaomana azo antoka amin'ny fandrosoan'ny indostrian'ny sarimihetsika, ny loka Scientific sy ny injeniera dia nanamafy ny satan'i RX ho fitaovana indostrialy hanamboarana sy hanatsara ny famokarana sarimihetsika maoderina. Amin'ny fampiasana ny fandrosoana ara-teknolojia amin'ny fikirakirana signal digital sy ny fianarana milina, ny RX dia namela horonantsary sy fandaharana amin'ny fahitalavitra tsy tambo isaina hamerina amin'ny laoniny ny feo simba sy mitabataba ho an'ny toetr'andro madio. Fitaovana manan-tsaina, ampiasain'ny fianarana milina, dia ampiarahina amin'ny fampisehoana an-tsary intuitive izay ahafahan'ny mpampiasa manova feo toa ny manitsy sary. Nampidirina voalohany tamin'ny taona 2007, iZotope RX dia nivoatra tamin'ny kinova fito taty aoriana mba ho lasa andian-dahatsoratra farany fanamboarana sy fanatsarana fitaovana misy.
RX dia nandray anjara tamin'ny isan-karazany Academy Award® horonantsary nandresy tamin'ny Sound Editing sy Sound Mixing, ao anatin'izany Whiplash, Mad Max: Fury Road, ary bohemian Rhapsody, ary koa mpandresy Sary Tsara Indrindra Birdman ary lisitra lava misy ny sarimihetsika avo lenta ao anatin'izany Black Panther ary Mpandroba: Endgame. Ny fahafahan'ny RX mamonjy feo efa simba dia namoaka ny horonantsary farany nataon'i Orson Welles Ny ilan'ny rivotra ary koa mamaha ny olana isan'andro amin'ny audio amin'ny famokarana lehibe ankehitriny, anisan'izany ny "Game of Thrones" sy "The Walking Dead." Nomem-boninahitra tsy tapaka avy amin'ireo fikambanana indostrialy toa ny Cinema Audio Society (mpandresy 5-fotoana ho an'ny Tekinika Fampisehoana), RX dia nanova ny zavakanto sy ny siansa amin'ny feo ho an'ny sarimihetsika.
“Voninahitra lehibe ho an'i Alexey sy ny ekipa ao amin'ny iZotope ny nahazo an'ity loka ity,” fanehoan-kevitra Mark Ethier, mpiara-manorina ary CEO an'ny iZotope. "Amin'ny maha orinasa anay dia mifantoka amin'ny fanohanana ny asa famoronana ny filmmaking amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo sakana ara-teknika amin'ny famokarana feo, ary ankasitrahanay izany fanekena ny fanavaozana anay izany. Feno fankasitrahana ihany koa izahay amin'ny vondron'ireo matihanina am-peo izay nanohana anay nandritra ny taona maro. Ny fikatsahany ny fenitra avo lenta amin'ny famoronana tantara no nahatonga ny asantsika. ”
"18 taona lasa izay no namelabelarako hevitra teknika vitsivitsy izay lasa iZotope RX taty aoriana," hoy i Alexey Lukin, injenieran'ny DSP Principal ao amin'ny iZotope. "Ity fanovana zato kaody C ++ zato lasa fitaovana enti-manara-penitra ankehitriny dia tsy ho tanteraka raha tsy nisy ny fifandraisanay mahatalanjona amin'ireo matihanina mandefa feo. Ny fandrenesana mivantana avy amin'izy ireo momba ny zavatra ilain'izy ireo amin'ny famoronana dia nanome hery sy nanome aingam-panahy anay hanao fomba tsy azo atao amin'ny fanovana am-peo. ”
iZotope koa dia nahazo fankasitrahana betsaka tamin'ny rindrambaiko famokarana mozika, ao anatin'izany Ozone ho an'ny mahafehy, Neutron ho an'ny fampifangaroana, ary ny Spire ecosystem ny fandraketana, ny famokarana ary ny fiaraha-miasa fitaovana. Anisan'ireo mpankafy fatratra an'i Spire i Pete Townshend, Trey Anastasio, Phoebe Bridgers, Paramore's Hayley Williams ary maro hafa, raha ny rindrambaiko iZotope kosa dia nanampy tamin'ny famolavolana ireo firaketana nosoratan'i Beyonce, Sia, Doja Cat, Shawn Mendes, Kendrick Lamar ary ny hafa.
Ao amin'ny iZotope, variana amin'ny feo mahafinaritra isika. Ny teknolojian'ny audio marani-tsainay dia manampy ny mpitendry mozika, mpamokatra mozika ary injenieran'ny paositra handinika ny asan'izy ireo fa tsy ny teknolojia ao aoriany. Izahay dia mamolavola rindrambaiko, plug-in, fikirakirana ary rindrambaiko finday nahazo loka tamin'ny alàlan'ny fanodinana feo avo lenta, ny fianarana ny milina ary ny interface interface tsara.
Previous: Lynette Duensing dia nomena anarana hoe mpiara-dia amin'ny fikambanana iraisam-pirenena mpandoko loko
Next: Mampifangaro sy mampifanaraka ny masom-panahin'i Cooke amin'ny sarimihetsika Cooke amin'ny vanim-potoana samihafa ao amin'ny The Marksman